संविधानले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन : ओली – Maitri News
संविधानले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन : ओली
maitrinews March 14, 2017
नेपालगञ्ज । नेकपा (एमाले) गत फागुन २१ गतेबाट सुरु गरेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत आज बाँकेको नेपागन्जमा भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय बासिन्दा झाँकी र जुलुशसहित नगर परिक्रमा गर्दै सभास्थलमा पुगेका थिए । मधेसी मोर्चाका नाममा विभिन्न ठाउँमा बाटो रोक्ने, सामूहिक रुपमा अवरोध सिर्जना गर्ने र बम प्रहार गर्नेसम्मका काम गरिएको थियो । त्यसका बावबुद ठूलो संख्यामा स्थानीय बासिन्दा कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयोः
देशका समस्या पहिचान गर्न र तिनको समाधान गर्नका लागि एमाले सक्षम छ । तिनै नीतिहरुका कारण आज एमाले लोकप्रिय बनेको छ ।
राजनीतिमा पक्ष, विपक्ष हुन्छन्, मतभिन्नता हुन्छन् । तर, त्यसैका नाममा आपराधिक बाटो लिने छुट कसैलाई छैन । संविधान बनिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिने कोसिस भइरहेको छ । यो एमालेमाथिको मात्र आक्रमण होइन, लोकतन्त्र र संविधानमाथिको. आक्रमण हो ।
एमालेलाई काला झण्डा हेर्ने फुर्सत छैन, देश निर्माणमा हिँडेको छ, राता झण्डा बोकेर हिँडेको छ । केही तत्वहरु देशलाई जात, भूगोल रधर्मका नाममा विखण्डन गर्न चाहन्छन् । नेपाल कहिल्यै विकासको बाटोमा जान नसकोस्, स्थिरता नहोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ ।
हिजो एउटा रुवान्डा थियो, आज छ वटा भइसके । युगोस्लाभियामा कट्टु लगाउने कपडा छैन तर एके ४७ बन्दुक भिराइयो । जातिजातिका बीचमा मारकाट भयो । नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गरयो । त्यही भएर कतिपयलाई छटपटी भएको छ ।
मधेसी दलहरु रहेसम्म मधेसका समस्या समाधान हुँदैनन् । उनीहरु कति पटक मन्त्री भए । आफूले हारे भने श्रीमतीलाई सासद, मन्त्री बनाउँछन् ।
केपी ओलीले हामीलाई युपी जाऊ, विहार जाऊ भन्यो भन्छन् । मैले भन्नैपर्दैन, हप्ता, १५ दिनमा आफै्रँ गएकै छन् ।
संविधानले कुनै भेदभाव गरेको छैन । संविधान बनाउने बेलामा विरोधमा उत्रिएकाले तिनीहरुलाई कुरा थाहा छैन होला, पढेर बताइदिए हुन्छ, कहाँ भयो भेदभाव ? भेदभावको हल्ला चलाएर संविधान मान्न सकिन्न भन्ने तर एमालेका विरुद्धमा मत हाल्न लागि ०७२ असोज २४गते कुदेर आए, फेरि ०७३ साउन १९ गते कुदेर आए । भत्ता खाने बेलामा संविधान मान्ने, मत हाल्ने बेलामा मान्ने, अरु समयमा मान्दिनँ भन्न मिल्छ ?
हामी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ । खाद्यान्न, लत्ताकपडा जस्ता वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनका लागि हामीले योजना अघि सारेका थियौँ । त्यो काम हामी गर्छौं, केही समय लाग्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, विशेष क्षेत्रको व्यवस्था, मत्स्यपालन, तरकारी खेती, औद्योगीकरण जस्ता काममा हाम्रो ध्यान छ ।
मधेसी मोर्चांले अहिलेसम्म १ सय ८१ जना मराएको छ, दुई सय जना मारेको छ । यसले मधेसमा अशान्ति मात्रै ल्याएको छ । म आह्वान गर्छु, आउनुहोस्, समृद्धि र विकासमा बाटोमा लागौँ, आफ्नोृ गलत नीति छाड्नुस् ।
कार्यक्रममा बोल्दै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भन्नुभयोः
नेकपा (एमाले) को लोकप्रियताले गर्दा अरु पार्टीको होसहवास उडेको छ । निर्वाचन भयो भने एमालेले जित्छ भनेर उनीहरु डराइरहेका छन् ।
एमालेले सद्भाव चाहन्छ । तर, अरु पार्टीले जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विष फैलाउन खोजिरहेका छन् ।
मधेसी मोर्चाका गलत क्रियाकलापले गर्दा मधेसलाई घाटा भएको छ । हिजोसम्म गुल्जार रहेको राजविराज, जनकपुर, सिरहा जस्ता सहरहरु आज सुकेका छन् । पहाडी मात्र होइन, मधेसी, मुस्लिम र थारु समुदायका मानिसहरुलाई सोध्नूस्, उनीहरु नै भन्छन्, यहाँ बस्ने अवस्था छैन । भन्सारमा एक नम्बरका रहेको बीरगन्ज आज सुक्दै गएको छ ।
देशभक्तिको भावना, राष्ट्रिय एकता र सद्भाव फैलाउनका लागि अभियान आयोजना गरेका छौ्रँ । यसले सबैलाई आपसमा जोड्नेछ । आम जनतामा चेतना र जागरण पैदा गर्नका लागि यो अभियान चल्नेछ ।
सामाजिक सुरक्षाका लागि हाम्रो पार्टी सधैँ प्रतिबद्ध छ । बृद्धाबृद्धा, एकल महिला, दलित आदिका लागि सामाजिक सुरक्षाको काम हामीले नै सुरु गरेका हौँ ।
मधेसका लागि विकासका काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै हो । तराईमा सडक, विमानस्थल बनाउने, सिचाइँ आयोजना सञ्चालन गर्ने, सदरमुकाममा ५० करोड विनियोजन गर्ने जस्ता काममा एमालेले अगुवाइ गरेको छ ।
मधेसी दलका नेताहरुले मधेसलाई अधिकार दिइएन भनेर गरेको प्रचारका पछाडि लाग्नु भनेको कागले कान लग्यो भनेर आफ्नो कान छाम्नुको साटो कागका पछाडि दौडिनु हो ।
नेपाली भूमिभित्र भारतीय सैनिकले गोली हानेर नेपाली नागरिकलाई मार्दा पनि भारतसँग कुरा गर्न नसक्ने लाचार सरकारका कारण हाम्रो शिर निहुरिएको छ । मधेसी दलका नेताहरुले उल्टै भारतले मारेको छैन भनेर विदेशीको चाकडी गरिरहेका छन् । विदेशीको चाकडी गर्न लाज लाग्दैन ?
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मधेसी मोर्चा नामको विखण्डनकारी तत्वले सामाजिक सद्भाव भड्काउन खोजेका चर्चा गर्दै त्यसका विरुद्ध जनताबीच एकता हुनुपर्ने बताउनुभयो । एमालेले सरकारमा पुगेर राम्रो काम गर्न थालेपछि विपक्षीको सातो जाने र त्यसलाई असंवैधानिक तरिकासमेत प्रयोग गरेर हटाउने गरिएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयोः
मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्दा नौ महिनामै हटाइयो, माधवकुमार नेपालको सरकारलाई नयाँ नेपाल बनाउने भयो भन्ने डरले हटाइयो, झलनाथ खनालको सरकारलाई सात महिना पनि टिक्न दिइएन, कपी शर्मा ओलीको सरकारलाई नौ महिना पनि काम गर्न दिइएन । अबको चुनावमा जनताले यी सबै कुरा हेरेर बहुमत दिनेछन्, एमालेबाहेक जनताले अरु पार्टीलाई विश्वास गर्ने छैनन् ।
आर्थिक केन्द्रहरुलाई अलग गरेर पाँच नम्बर टुक्र्याउने कुरामा षड्यन्त्र जोडिएको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रलाई तराईसँग नजोडेर हामीले गल्ती गरेका र्छाँ । दुई नम्बरमा पनि गल्ती भएको छ । एमालेले बहुमत पाएपछि त्यो गल्ती सच्याउँछौँ । हरेक प्रदेशलाई पहाड र मधेससँग जोड्छौँ । मधेसीका नाममा जे तिमीहरुले चाहेका छैनौ, हामी त्यहीँ गर्छौं ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको क्षेत्र हामीलाई चाहियो भन्ने मधेसी नेताहरुको माग छ । के यो तिमीहरुको जमिन्दारी हो ? यहाँका जनताको माग त्यो छैन, हामी त्यस्तो हुन दिँदैनौँ ।
१ सय २३ भाषाभाषीहरुका बीचमा सम्पर्क भाषाका रुपमा नेपाली रहँदारहँदै हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याइएको छ । यसले नेपाली भाषालाई होइन, मैथिली, भोजपुरी, थारु जस्ता भाषालाई विस्थापित गर्छ । हामी त्यस्तो राष्टघाती प्रस्तावलाई कुनै हालतमा सफल हुन दिन्नौँ ।
राजविराममा पेट्रोल बम प्रहा। गरेर एमालेको नेतृत्वलाई समाप्त पार्न खोजियो । त्यस्तो गर्न चाहनेहरुलाई रोकेवापत प्रहरीहरुलाई कारवाही गरियो । एमालले जनताको मनमा छ । त्यसैले पेट्रोल बम त के एटम बम हाने पनि एमाले समाप्त हुँदैन ।
मनमोहन अधिकारीको सरकारले एक सय रुपियाँबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई हजार बनायो । अब एमालेको बहुमतको सरकारले पाँच हजार बनाउनेछ ।
पोलिट्ब्युरो सदस्य लालबाबु पण्डितले मधेसका ठेकेदार ठान्नेहरुले नै मधेसी जनताको शोषण गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मधेसका सदरमुकाममा पुग्नुभयो भने तपाई सबभन्दा बढी वकिल, अदालत, न्यायाधीश र झगडिया पाइन्छ । त्यहाँ झगडा छ । त्यसबाहेक मधेसमा सबभन्दा ठूलो गरिबी छ । त्यसलाई हटाउनका लागि मधेसी दलहरुले के गरेका छन् ?’ उहाँले मधेसका नाममा त्यहाँका ५६ जना मन्त्री भए पनि मधेसी जनताको जीवनस्तरमा कुनै फरक नआएकाले जनता सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मधेसी जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरुले विदेशीको नभई स्वददेशीको वकालत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा बाँके जिल्ला इन्चार्ज दिनेशचन्द्र यादवको अध्यक्षता, बैकल्ल्पिक केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद हारुन हलवाईको सञ्चालन र बाँके जिल्ला अध्यक्ष अशोक कोइरालाको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गरिएको थियो ।
नेपालगञ्जको कार्यक्रम सकेर अभियानको केन्दीय टोली बर्दियाको सदरमुकलाम गुलरियातर्फ प्रस्थान गरेको छ । गुलरियामा सभा आयोजना गरिनेछ ।
चैत १ गते ।
Previous Previous post: फ्रान्सेली खाना महोत्सव मङ्गलबार
Next Next post: नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियानमा चार अर्ब बढीको प्रतिबद्धता